Maamulka dagmada Cabdilcasiis oo saxafada u soo bandhigay dhalinyaro iyo qamri howlgalo ay ku soo qabqabteen (DAAWO SAWIRADA ) | Somalisan.com Home
Maamulka dagmada Cabdilcasiis oo saxafada u soo bandhigay dhalinyaro iyo qamri howlgalo ay ku soo qabqabteen (DAAWO SAWIRADA ) 5/23/2012 12:52:00 Howlgalaan ayaa maalmihii ugu danbeeyey ka socday qaybaha ay ka kooban tahay dagmada cabdicasiis ee gobolkani Banadir Maamulka Gobolka Banadir ee dagmada Cabdilcasiis oo howlgalo ku soo qabqabtay dhalinyaro ay sheegeen in ay ka ganacsanayeen qamri iyo muqaadiraad kale .
Shir jaraid oo ay si wada jir ah u wada qabteen taliyaha ciidamada bolice-ka ee qeybaha guud ee gobolka banadir Janeral garaad ,gudoomiyaha dagmada cabdicasiis iyo Afhayeenka gobolka Banadir ayey ku sheegeen inay baritaano iyo howglao ay ka fuliyeen nawaaxiga xeebta liido ayey ku soo bandhigeen in ka badan 21tartoon oo qamri ah iyo 4 dhalinyaro kuwaas oo gacmaha katiinado uga xiran yihiin waxaana ay sheegen in la soo qabtay iyaga oo ku guda jira kala iibsiga qamriga .
Sidoo kale gudoomiyaha dagmada cabdilcasiis Cabdulaahi xuseen Xasan ( Cabdulaahi Fanax ) oo isne saxaafada kula hadlay goobta lagu soo bandhiga maxaabiista iyo alaabooyinka ay qamriga ka mid tahay ayaa si caro leh uga hadlay isaga oo ku nuuxnyuuxsaday in ay diinta islaamku xaaraantinimeyneyso qaadashada iyo isticmaalka qamriga ayna munaasib tahay in isla goobta lagu gubo .
Taliyaha ayaa sheegay in ay alaabooyinkaan ay shaqaalaha maraakiibta la socoto uga soo bedesheen badeecado kale oo ay u baahnaayeen ka dibna la soo qabtay inyaga oo ay dooni siday keentay xeebta ka dibna lagu soo qaaday gaari yar oo kuwa raxada ah .
Janaraal Garaad Nuur Cabdulle ayaa ka cudurdaartay in aan qamrigaan la gubi Karin inta lagu cadaynayo ragii lagu soo qabtay ayna marqaati u tahay xaga maxkamadaynta maxaabiista wuxuuna balanqaaday in bulshada horteeda lagu gubi doono markii la xakumo maxaabiista ka dib Qaar ka mid ah maxaabiista oo saxaafada la horkeenay ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay ku luglahaanshiyahay waxyabaha lagu eedeynaayo .
Maxaabiista ayaa kala ahaa daralkii gaariga ,naaquudihii doonta ,iyo laba nin oo ahaa kuwii maraakiibta badeecada uga soo bedeshay Warar kale oo xiiso leh halkaan ka aqriso. tweet FG: Shabakada Wararka ee Somalisan Mas'uul kama ahan Cidii ku xadgudubto Shaqsi Raalina kama noqonayso Somalisan.com. Fikirkaaga hoos kadhiibo: